Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ka timid Tidal waxay noo ogolaaneysaa inaan ku isticmaalno CarPlay | Waxaan ka socdaa mac
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ka timid Tidal waxay noo ogolaaneysaa inaan ku isticmaalno CarPlay
Hadda labadaba Spotify iyo Apple Music, Iyagu waa boqorrada muusikada muusikada, waax ay shirkadahaas kaliya ku xayeysiiyaan xogta isticmaalaha, labada macmiil iyo macaamiil iyo kuwa adeegsada nooca bilaashka ah, sida Spotify. Laakiin marka lagu daro adeegyadan, waxaa jira waxyaabo kale oo suuqa yaal sida Amazon Prime Music, Google Music ama Tidal.
Saddexdaan adeeg ee muusikada qulqulka ah waligeen xog rasmi ah nagama helin tirada isticmaaleyaasha mana u badan tahay inaan waligeen ogaan doonno. Waqtigan xaadirka ah labada Spotify, iyo sida iska cad Apple Music waxay la jaan qaadayaan CarPlay, laakiin ka dib markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyo arjiga Tidal, tani waxay sidoo kale noqotay ikhtiyaar lagu dhageysto muusigga aan jecel nahay, illaa iyo inta aan bixinayno diiwaangelinta.
Waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in TIDAL ay hadda tahay mid loo yaqaan 'CarPlay waafaqsan'! Diyaar u noqo inaad marin ka hesho dhamaan muusikada aad jeceshahay & TIDAL-ka liistada aad ka heleyso shaashadda gaarigaaga. pic.twitter.com/JqqMFbJlwg
- TIDAL (@TIDAL) December 6, 2017
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee arjiga Tidal ee loogu talagalay macruufka, kuma koobna oo keliya iswaafajinta tikniyoolajiyadan Apple si loogu xiro bartamaha fara badan ee baabuurkeenna, laakiin sidoo kale wuxuu na siinayaa mawduuc mugdi cusub, si looga faa'iideysto shaashadda OLED ee iPhone-ka cusub Iyo dhacdo ahaan, waxaa sidoo kale loo habeeyay qaabka shaashadda cusub ee iPhone X.
Apple wuxuu soo bandhigay CarPlay WWDC 2014, tiknoolajiyad maanta si sii kordheysa loogu heli karo gawaari badan, badanaa ikhtiyaar ahaan, wax laga yaabo inay isbeddelaan waqti ka dib. Laakiin inkasta oo xaqiiqda ah in soo-saareyaasha gawaarida ee sii kordhaya ay ku sharraxayaan tikniyoolajiyadan, tirada codsiyada iswaafajiya ayaa weli aad u yar.
Haddii aan u istaagno si aan u helno barnaamijyada hadda la jaan qaadaya CarPlay, waxaan ka helaynaa barnaamijyada muusikada qulqulka sida Spotify, Apple Music iyo Tidal, iyo sidoo kale codsiyo lagu ciyaaro barnaamijyadeenna aan ugu jecel nahay. Waxaan sidoo kale heli karnaa codsi khariidado kale ah iyo in yar oo dheeri ah. Iyadoo lagu xisaabtamayo in tikniyoolajiyaddani ay inta badan la tashanayso macluumaadka la xiriira safarkayaga ama muusigga la garaaco, waa macquul in codsiyo badan aan la cusbooneysiin ama aan sida ugu dhaqsaha badan loo sameyn doonin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee ka timid Tidal waxay noo ogolaaneysaa inaan ku isticmaalno CarPlay
Lambarka moodeelka ayaa muujinaya dhawaanshaha iMac Pro ee la filayo
9x13 Podcast: Waxay ku dhowdahay Kirismaska ​​Apple